नेपाल आज | टिकटक ‘एडल्ट एप’ जस्तै
सँगैकी सहकर्मी साथीले मलाई भनिन्, ‘हेर न, हिजोआज अफिस आउँदा टिकटक नहेरी घरबाट निस्किन पनि मन लाग्दैन ।’ मैले खिसीको भावमा मुस्कुराईदिएँ । किनभने म खासै टिकटक गर्दिन र लत नै बस्नेगरी त अरु एप, साइटहरु पनि हेर्ने गर्दिनँ ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला पब्जी र टिकटक अत्याधिक चर्चाका विषय बनेका छन् । यी दुवै एप उपयोग गर्नेहरुले लिने मनोरन्जन त बेग्लै भयो नै नचलाउनेहरुले पनि यी एपबारे बनेका ट्रोलहरुबाट राम्रै मनोरञ्जन पाइरहेका छन् । तर यी एपबारे निगरानी राख्ने निकाय नहुँदा यसले पारेका नकारात्मक प्रभाव असरल्ल छन् । पब्जीले त भारतमा एसिड पिउनेदेखि होस् गुमाउने जस्ता घटना भइसकेका छन् ।
यस्ता एपबाट फाइदा लिन जान्नेहरु पनि छन् । टिकटकबाटै रेश्मा घिमिरे अहिले चर्चामा छिन् । उनी अभिनित ‘इन्स्टाको फोटो’ बोलको म्युजिक भिडियो हिट रह्यो । योसँगै उनले अन्य थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकिन् ।
त्यस्तैगरि टिकटकमा हिट भएर म्यूजिक भिडियोमा छाउने दुई जुम्लयाहा दिदीबहिनी पनि हुन् । प्रिस्मा र प्रिन्सी नाम गरेका यी दुई दिदीबहिनीले नायक पल शाहसँग म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छन् । उनीहरु अभिनित उक्त म्यूजिक भिडियो पनि यूट्यूब ट्रेन्डिङको पहिलो नंबरमा पर्न सफल भएको थियो ।
बाइट डान्स नामक कम्पनीले टिकटक एप सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा लन्च गरेको हो । तर लोकप्रियता भने २०१८ मा कमायो । यसबाट भएका फाइदामध्ये आमदानी पनि एक विशेष फाइदा हो । भिडियोमा कुनैपनि कम्पनीको ब्राण्डको प्रचार गरिदिएदेखि लिएर भिडियोको भ्यूज, लाइक, कमेन्ट र शेयरसम्मको कमाई हुन्छ ।
पब्जीको चर्चा गर्दा अहिले सिनामंगलस्थित पब्जी क्याफेको स्थापना भइसक्यो । पब्जी खेलमाजस्तै सेट तयार पारेर बनाइएको उक्त क्याफेमा अहिले युवापुस्ताको घुईंचो लाग्ने गर्छ । भोलिको दिनमा पब्जीमा प्रतिबन्ध नै लागे पनि त्यो खेल इतिहासमा रहने र मानिसहरु खेलका दिन सम्झनामा मात्र पनि उक्त क्याफेमा जानुमा दुई मत छैन ।
टिकटकबाट धेरैले आफ्नो अभिनय रुचीलाई पूरा गर्ने मौका पाएका छन् । १५ सेकेन्डको भिडियोमा आफ्नो अभिनय देखाएकाहरु कतिले हेर्नेलाई पनि दिक्क बनाएका छन् भने कतिले वाहवाही । हामी नेपालीहरु नेपाली सेलिब्रेटीलाई फलो गर्छौं । तर सेलिब्रटीहरु भने बलिउड कलाकारहरुको नक्कल गर्दै टिकटक गरेर नेपाली फलोअरलाई लोप्पा खुवाउँछन् । नेपालका नामी सेलिब्रेटीजस्ता व्यक्तिले बलिउड डायलगमा टिकटक गर्नु कत्तिको राम्रो होला ? जो आफैं माग्ने छ उसैसँग पैसा माग्न कसलाई मजा आउँछ ? सायद यस्तै पाराले पनि होला नेपालका सेलिब्रटीमा स्टारडमको अभाव खड्किएको ।
पब्जीमा मानिसहरुको आसक्तिका कारण प्रतिबन्ध लगाउन सरकार तल्लिन भइसकेको छ । टिकटकको निगरानी कसले गर्ने ? के यसमा सेन्सर हुनु जरुरी छैन ? समाजिक सञ्जालमा हामीले के सामाग्री दिइरहेका छौं भन्ने कुराले मन मष्तिष्कमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हुँदा हुँदा ¥यापर साकार अधिकारीले केही वर्षअघि फेसबुक लाइभमा बोलेका अश्लिल गालीहरुको पनि टिकटक बन्न थालेको छ । त्यस्तो गालीमा अभिनय गर्नेमा महिलाहरु बढी छन् । यो प्रशंगमा एक मामुली प्रश्नः यसले दिने सन्देश हे हुन्छ ?
टिकटकको उद्देश्य मात्र मनोरञ्जन दिने हो भन्ने कुरामा दुई मत नै छैन । तर, के मनोरञ्जनको नाममा जे पनि गर्दै हिड्ने ?
केही समयअघि एकजना बालकको भिडियो भाइरल भयो । सय सम्मको अंक भन्दा बिहान हुन्छ भन्ने ती बालकको वालसुलभ तर्कबाट धेरैले मनोरञ्जन लिए । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । बच्चाको पनि टिकटक बनाएर भिडियो हाल्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? बच्चाहरुलाई हामीले हाम्रो मनोरञ्जनको वस्तु किन र कहिलेसम्म बनाउने ?
टिकटकको प्रयोग गर्न कम्तीमा पनि १६ वर्ष हुनुपर्ने अमेरिकाको कमन सेन्स मिडियाले जनाएको छ । यो एप एप्पल १२ प्लस रेटिङमा छ । त्यस्तैगरि गुगल प्लेस्टोरमा ‘टीन म्याच्यूरिटी’ रेटिङमा छ । केही समय अघि पनि टिकटकमाथि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत सूचना अवैधानिक तरिकाले संकलन गरेको अभियोग लागेको थियो । जसकारण अमिरिकी संघीय व्यापार आयोगले टिकटकमाथि ५.६ मिलियन डलर जरिवाना लगाएको थियो । नेपालमा पनि यो एपलाई ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ दिँदा फरक नपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।